people Nepal » राप्रपाको घोषणापत्र सार्वजनिक : हिन्दुराष्ट्र फर्काउने घोषणा राप्रपाको घोषणापत्र सार्वजनिक : हिन्दुराष्ट्र फर्काउने घोषणा – people Nepal
राप्रपाको घोषणापत्र सार्वजनिक : हिन्दुराष्ट्र फर्काउने घोषणा
२१ कात्तिक,काठमाडौं : उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई लक्षित गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । उसको घोषणापत्रमा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फर्काउने संकल्पलाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
मंगलबार बिहान ललितपुरस्थित हिमालय होटलबाट सार्वजनिक भएको घोषणापत्रमा नेपालको भूराजनैतिक अवस्था एवं धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै राजतन्त्र फर्काउने संकल्पसहितको दस्तावेज सार्वजनिक भएको हो । कमल थापा लामो समयदेखि राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । थापा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालका गृहमन्त्री समेत हुन् ।
कलम थापाले घोषणापत्रमा आफ्नो पार्टी चुनावी राजनीतिभन्दा माथि रहेको र त्यही आस्थामा निरन्तर अटल रहेको एउटा संस्था भन्दै राजतन्त्र फर्काउने संकल्प गरेका छन् । कमल थापाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत रहने, देशको शासन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गर्ने तथा संसदको परिधि र संविधान अन्तर्गत राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतिकको रुपमा संवैधानिक राजसंस्था रहने छ ।’
राप्रपाको घोषणापत्रमा राजसंस्थासँगै हिन्दु राष्ट्रलाई समेत महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणापत्र, २०७४ आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु, हामी नेपाली जनता फेरि एकपटक महान प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुन गईरहेका छौं ।
आगामी प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक वातावरण कायम गर्दै समग्र आर्थिक विकासको दिशातर्फ अघि बढ्ने स्वर्णिम अवसर हो । यो चुनाव नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने ऐतिहासिक क्षण पनि हो । यस्तो महत्वपुर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुन लाग्नु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछ । करिब अठार वर्षपछि संसदको चुनाव हुँदैछ । नेपालको संविधान जारि भएपछि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदैछ ।
यस अवसरमा स्वभाविक रुपले विगत दुई दशकको देशको अवस्थाको विश्लेषण र मुल्याङन हुन जरुरी र प्रासंगिक हुन्छ । मुलुकमा आमुल परिवर्तनको नारा दिएर २०५२ मा शुरु भएको हिंसात्मक द्वन्द्व र २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात हामी कहाँ जान हिंडेका थियौं र अहिले कहाँ आईपुगेका छांै, यसको समिक्षा आम नेपाली मतदाताहरुले ईमानदारी पुर्वक गर्नु पर्दछ । चुनाव भनेको केवल भोट हाल्ने सामान्य प्रक्रिया मात्र होईन । चुनाव मुलतः देश र जनताको भाग्यको फैसला गर्ने महान प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । विवेक र न्यायको प्रत्याभुति दिलाउने र अभिव्यक्ति गर्ने आत्मदान हो चुनाव । त्यसर्थ, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाईहरु, देशको वर्तमान अवस्थाको समिक्षा गरौं । नेपालको ईतिहासमा अनेक उतारचढावहरु आए गए, व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए, शासकहरु फेरिए ।
व्यवस्था र व्यक्ति राम्रो नराम्रो जे भएपनि नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र एकता सदैव अक्षुण्ण रहेको थियो । अहिले सानै रुपमा भएपनि देश टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने एउटा समुहको जन्म भएको छ र तराईमा क्रियाशील छ । नेपालको राष्ट्रिय पहिचानको रुपमा रहेको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं नेपाली समाजको अस्तित्व र एकताको आधारको रुपमा रहेको हिन्दुत्व विस्थापित हुने खतरा बढेर गएको छ । समग्र अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । प्रत्येक दिन करिब दुई हजार युवाहरु सामान्य रोजगारीको निमित्त विदेश पलायन हुनु पर्ने बाध्यता त्यसको ज्वलन्त उदारहण हो । प्रजातन्त्र स्वयं सुदृढ हुन सकेको छैन ।
प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु उग्रवामपन्थी धरापमा पर्न सक्ने तथा अधिनायकवाद हावि हुन सक्ने खतरा कायम नै छ । राज्यको प्राय सबै संयन्त्रहरु पार्टीकरणको तिव्र चपेटामा परेर निष्प्रभावी बन्दै गैरहेका छन् । भ्रष्टाचार अत्यन्त डरलाग्दो रोगको रुपमा देखा परेको छ । गरिब र धनी बिचको खाडल फराकिलो हुँदैछ र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी बस्ने जनताको संख्या अपेक्षित रुपमा घट्न सकेको छैन । आखिर यस्तो किन भयो ? सदियौंदेखिको दासताबाट नेपाली जनतालाई मुक्त तुल्याउने लक्ष्य बोकेर सुरु भएको अभियान किन विपरित दिशातर्फ मोडियो ? चुनावमा मतको प्रयोग गर्नुपूर्व आफ्नो अन्तरआत्मासँग यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु प्रत्येक नेपाली मतदाताको राष्ट्रिय दायित्व हो । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा केवल केही पात्रहरुको कमजोरी मात्र होईन । निश्चय पनि नेतृत्वमा रहेका पात्रहरुको अकर्मण्यता र सत्तालिप्साको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । तथापि, मुलतः गलत नीति र मार्गचित्र नै मुलुकको वर्तमान नियतीको मुल कारक हो । यो प्रवृत्ति, नेतृत्व र कारकतत्वलाई तत्काल वा हठात परिवर्तन गर्न सकिन्न । आगामी चुनावले त्यस दिशातर्फ निकै सुधार गर्न सक्दछ ।
केवल मतदाताको विवेक र साहसिक निर्णयको आवश्यकता पर्दछ । जनताले आफुलाई पार्टीको दावेदारको रुपमा होईन देशको मालिकको रुपमा सोचेर राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई दण्ड दिने कार्यको थालनी नै देश बचाउने र बनाउने मुल मन्त्र हो । यसै पृष्ठभूमीमा नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकमा विद्यमान संकट समाधानको निमित्त वैकल्पिक विचार, नीति र मार्गचित्र बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील रहेको छ । सम्बर्द्धनवादको वैचारिक दर्शनको धरातलमा उभिएर राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुत्व, सुदृढ स्थानीय शासन प्रणाली र खुला बजारमुखि आर्थिक नीतिको माध्यमबाट सवल र सम्बृद्ध नेपाल निमार्ण गर्ने परिकल्पना नै राप्रपाको वैकल्पिक विचार र मार्गचित्रको मुलभूत सार हो । नेपालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै आफ्ना मान्यता र लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीति राप्रपाले अवलम्बन गरेको छ । यही नीति र मान्यतामा अडेर आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको निमित्त यो घोषणापत्र ंजनसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौं । आम नेपाली मतदाताहरुको स्नेह, सद्भाव र मतको निमित्त सविनय अपिल गर्दछौंं।
राप्रपा सुस्पष्ट विचार र अलग पहिचान बोकेको राजनैतिक दल हो । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा सशक्त वैचारिक प्रतिपक्षको रुपमा स्थापित भएको छ । अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो विचारमा अविचलित रुपले प्रतिवद्ध रहने सिद्धान्तनिष्ट पार्टीको रुपमा राप्रपाको पहिचान बनेको छ । – राप्रपा आफ्नो सिद्धान्तमा अटल रहने, सक्षम, राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, कर्मठ एवं ईमानदार नेता तथा कार्यकर्ताहरु भएको पार्टी हो, जसलाई नेपाली जनताले भरोसा गर्न सक्दछन् । – आगामी चुनावमा दुई मुख्य विषयहरुमा राजनैतिक दलहरुलाई जनताले जनादेश दिनेछन् । त्यो हो पहिलो, पाँच वर्षसम्म सरकारको संचालन र दोस्रो मुलुकको भावी वैचारिक कार्यदिशाको निर्धारण । पाँच वर्ष अगाडि यस्तो जनादेश प्राप्त गर्ने प्रमुख भनिने राजनैतिक दलहरु अलग–अलग एवं समष्टिमा समेत आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न असक्षम भएका छन् । ती दलहरुले परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा अवलम्बन गरेका मार्गचित्र, नीति र अवधारणाहरु असफल सावित भएको छ । ती दलहरुले जनतालाई धोका दिएका छन् तथा तिनको अकर्मण्यता, राष्ट्रहित विरोधी चरित्र, अविश्वसनीय बोली तथा व्यवहार, गलत नीति र सत्तालोलुपताले गर्दा देश अहिले संकटको भुमरिमा परेको छ । फलरुवरुप जनता विकल्पको खोजीका छन् । त्यो विकल्प राप्रपा हो । – यसैबीच दिगो शान्तिको स्थापना, राष्ट्रियताको सम्बर्द्धन, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं समग्र आर्थिक विकासको उदेश्य प्राप्तिका निमित्त राप्रपाले वैकल्पिक मार्गचित्र र अवधारणा जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । असफल मार्गचित्र, पात्र, प्रवृति, नीति र नेतृत्वको विकल्प खोज्ने कार्यमा आगामी चुनावबाट राष्ट्रले साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको छ । त्यो अपेक्षा जनताका ताजा जनआदेशद्वारा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने राप्रपाको दृढ अठोट छ ।